Kalsoonida Badbaadinta Hantida ee Dibedda - Furitaanka, Qiimaha iyo Istiraatiijiyadda
Kalsoonida Badbaadinta Hantida
Marka ay timaado ilaalinta waxyaalaha nolosha ee aad sida ugu badan u shaqeysay, waxaa laga yaabaa inaad ogaato inaad ubaahantahay wanaag qorshaha ilaalinta hantida. Qorshahaagu waa inuu ilaaliyaa lacagtaada, hantidaada, maalgashigaaga, ama waxyaabo kale oo qiimo leh reerkaaga iyo jiilalka soo socda. Abuuritaanka qorshe wax ku ool ah oo loogu talagalay hantida qiimaha leh way ku adkaan kartaa gudaha Mareykanka, in kasta oo ay jirto. Aaladaha sharciyeed ma ahan kuwo adag mana aha garsoore ku saleysan natiijada Mareykanka inuu shaqada ka eryi karo. Marka, qorsheynta ilaalinta hantida ugu adag dad badan oo reer Galbeedka ah ayaa u jeesta qaab dhismeedka ilaalinta hantida oo ka baxsan xuduudaha dalka. Oo ka mid ah aaladda ugu adag ee hantida looga ilaaliyo dacwadaha ayaa ah Kalsoonida ilaalinta hantida shisheeye si sax ah loogu habeeyay xukunka saxda ah.
Kalsoonida ilaalinta hantida shisheeye waxay noqon kartaa qaab wax ku ool ah oo lagu ilaaliyo hantidaada laguna hubiyo inaad ka faa iideysato. Laakiin muxuu yahay aaminida hantida shisheeye? Halkee ku abuuri lahayd hal? Maxay runtii u fiicantahay? Maqaalkani wuxuu sahmin doonaa jawaabaha su'aalahan sidoo kale wuxuu sharxi doonaa qaar ka mid ah tixgelinnada iyo wadiiqooyinka loo abuuri karo kalsooni dibadeed.
Waa maxay Awoodda Ilaalinta Hantida?
Kahor intaadan sahamin ka sameyn sameynta aaminaada ilaalinta hantida badaha, aan ka wada hadalno sida saxda ah ee aaminka hantida hantiyeed. Investopedia qeexaa kalsoonida ilaalinta hantida in ay tahay gaari lagu haysto hantida qofka. Gawaaridan ayaa ugu horreyn ka ilaaliya hantidaas dayn-bixiyeyaasha. Marka aaminka si fiican loo aasaaso, aaladdan lacageed waxay ku ilaalineysaa deyn bixiyeyaasha. Bedel ahaan, waxay u oggolaaneysaa deyn bixiyeyaasha inay la deymiyaan deymaha iyadoo la raacayo shuruudaha habboon lagana fogaado dacwadda qaaliga ah
Dhammaan aaminaduhu waxay leeyihiin seddex qaybood oo waaweyn oo ku lug leh: dejiraha (oo sidoo kale loogu yeero aaminka ama deeqeyaha), wakiilka, iyo ka faa iidaystaha. Deganahu waa kan abuuraya kalsoonida. Goluhu wuxuu gacan ka geystaa hantida uu aaminku ilaaliyo. Wakiilka ayaa maamusha aaminka kadib abuurista faa'iidada kafaa iideystaha. Ka-faa'iideysteha ayaa ka hela qaybinta ka timaadda aaminaadda. Qaybintaani waxay ka dhacdaa ikhtiyaarka wakiilka, iyada oo maskaxda lagu haayo ujeedada asalka ah.
Ma la Tirtiri karaa mise Kalsoonida Aan La Gudbi Karin?
Si loo helo kalsoonida inay u qalmaan sida aaminka hantida, waa inaan laga noqosho lahayn. Taas micnaheedu waxaa weeye ka dib markii aaminaada la aasaaso, qofku si dhakhso ah uma beddeli karo ama ma burin karo si toos ah iyada oo aan faragalin quseyn. Waa tan sababta. Haddii degane ama ka-faa'iideystehu isbeddelo toos ah u sameyn karo, garsooraha wuxuu ku qasbi karaa qofkaas inuu u beddelo ka-faa'iideystaha cadowga sharciga ah. Marka, iyada oo laga dhigayo mid aan laga beddeli karin waxay xaddidaysaa awoodda ay maxkamaddu u leedahay in ay ku khasbto in isbeddello ku timaado wax u dhimaya dhinacyada is aaminka ah. Qoddobka qarsoodiga ah wuxuu ka-faa'iideysteyaasha ka horjoogsanayaa in ay baabi'iyaan aaminaadda ama bixinta ballan-qaadyada dhinacyada saddexaad. Qodobkaani wuxuu kaloo ka ilaaliyaa dhaxalka ka faa'iideystaha weerarada deyn bixiyaha.
Kaliya dhowr dowladood oo Mareykanka ah ayaa si buuxda u oggolaanaya aaminka hantida maguurtada ah. Qaar ka mid ah kuwa ugu caansan waa Alaska, Delaware, Nevada iyo South Dakota. Dhowr dowladood oo dheeri ah ayaa bixiya kalsoonidaan xadidan. Shakhsigu wuxuu abuuri karaa aaminaad ilaalin hanti oo ku nool gobol aysan deggeneyn. Laakiin dhammaan aaminaadaha gudaha waxay ku shaqeeyaan gudaha qaanuunka sharciga guriga. Sidaa darteed, garsooraha California ayaa iska indhatiri kara qodobada ilaalinta hantida ee aaminka Nevada. Garsooraha Mareykanka wuxuu awood u leeyahay aaminaada Mareykanka iyo wakiilka Mareykanka. Garsoorayaasha Mareykanka awood yar ayey ku leeyihiin wakiilada shisheeye. Marka, si loo helo ilaalin wanaagsan, asturnaanta, iyo dheefaha, doorashada ugu fiican ayaa caadi ahaan ah in la tago meel ka baxsan. Waxaan asaasnaa aaminid hanti maaliyadeed oo shirkadaheena sharciga xeebaha ka shaqeeya ay u adeegayaan wakiil ahaan.
Maxaa loo Dhoofi karaa Xeebaha Dalka?
Sida lagu sheegay qaybtii hore, waxaad samayn kartaa aaminaad ilaalin hanti oo halkan Mareykanka ah, iyadoon loo eegeyn gobolka aad ku nooshahay. Maxaad ugu baahan tahay inaad maslaxadda geliso inaad hantidaada geliso meel aamin ah oo dhinaca badda ah markaa? Sida Nomad Caasimad sharaxaa, waxaa jira laba sababood oo muhiim ah tan: asturnaanta iyo ilaalinta.
Aasaasida a Kalsoonida dibedda ee ilaalinta hantida, wakiilka ayaa loo magacaabay. Ammaano hayaha ayaa maamusha hantida, wuxuu hayaa magac, wuxuuna kormeeraa hantida iyo wixii hanti ah ee kale ee lagu aaminay. Wakiilka ayaa u sameeya tan hab guud ahaan ka joojinaya aaminaada iyo deeq qaataha diiwaannada dadweynaha. Abuurista kalsoonida meel ka baxsan xeebta ayaa sidoo kale siinaysa difaac dheeri ah qolka maxalliga ah ee maxalliga ah. Sidoo kale waa canshuur-saaxiibtinimo sida cashuurta aaminaada badda caadiyan waa canshuur dhexdhexaad ah. Marka, ma kordhinayso mana dhimayso cashuurahaaga.
Ka baxsan Gaarista Maxkmadaha Maxalliga ah
Intaas waxaa sii dheer, waxay ka hortageysaa garsoorka wadankaaga inuu ka codsado wakiilka amaahayaha inuu siideyo deyn ama hanti. Mar labaad, wakiilo shisheeye ma hoos yimaadaan maxkamadaha gudaha. Haddii deyn bixiyuhu doonayo inuu raad raaco hantidaas, waxay ku qasban yihiin inay maraan dagaal dheer oo qaanuun qaanuun ah oo ka dhaca xukunka kalsoonida badda. Intaas waxaa sii dheer, waa inay ku dagaallamaan goobta jawiga ku jirta ee deynka lagu leeyahay. Taasi waxay u tahay caqabad adag deyn bixiyaha.
Aaminaada ilaalinta hantida badaha ayaa kuu ogolaaneysa inaad wali gasho faa'iidooyinka hantidaada. Isla mar ahaantaana, waxay ku xafidaa jiilalka dambe ee qoyskaaga. Aaladdaan lacageed waxay kaloo u oggolaaneysaa koox kale, wakiilkaaga, inuu kugula taliyo dariiqooyinka lagu kobcin karo hantida lagu aaminay. Hal shay oo xusid mudan, in kastoo, ay tahay in Kordhinta kalsoonida hantida hantida laga yaabaa inay waxoogaa ka sarreeyaan qiimaha lagu dejiyo a aaminka ilaalinta hantida. Laakiin maskaxda ku hay, qiimaha waa waxa aad bixiso. Qiimaha waa waxa aad hesho. Aaminaadda qoyska ayaa laga yaabaa inay waxoogaa ka jaban tahay. Laakiin haddii garsooraha ku qasbo wakiilkaaga mareykanka inuu wareejiyo dhamaan hantidaada, sifiican, kalsoonida dibadu waxay noqon kartaa xulashooyinka ugu qaalisan.
Kalsoonida Badbaadinta Hantida ee Furiinka
Markaad furiin la kulanto, ku dhawaad ​​wax kasta oo aad leedahay waa u nugul yahay inaad mooyee xaq u leedahay mooyee. Adeegsiga aaminaad si loo ilaaliyo hantida furiinka waa tallaabo caqli gal ah maxaa yeelay hantidaasi way ka goysaa lahaanshaha adiga, aaminka, sida Forbes sharaxaa. Aaminaada ilaalinta hantida ayaa waxay siineysaa lahaanshaha hantidaas aaminaada lafteeda, sidaa daraadeed hantidaasi kuma jiraan go'aaminta deeqda hantida ama qeybsiga hantida. Qaar ka mid ah aaminaadaha xitaa waxay bixiyaan qodobo aad u qeexan oo sheegaya in qofka / seyga mustaqbalka ah uusan laheyn sheegasho ka dhan ah hantida aaminka.
Haddii aad tahay milkiile ganacsi, tani gaar ahaan faa'iido ayey leedahay. Kalsoonida laga qabo hanti-dhaafka ah ee dibedda waxaa laga helaa ilaalin inta badan hay'adaha, oo ay ku jiraan C Shirkadaha, Shirkadaha Caymiska Xaddidan (LLCs), iyo Shuraakada Xaddidan. Marka weerar sharci la qaado, waxaa ugu wanaagsan in shirkadahaas maxalliga ah loo beddelo kuwa shisheeye. Tan waxaa ugu wacan garsoorayaasha gudaha ayaa leh awooda shirkadaha guryaha. Kalsoonida laga qabo hanti-dhaafka dibedda ma ahan doorashada ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'S Corporations', maaddaama kaliya dadka gudaha ah iyo noocyo ka mid ah kalsoonida guryaha ayaa iska leh. Si wada jir ah, LLC ka baxsan iyo aaminaada ilaalinta hantida ayaa bixin kara gaar ahaan faa'iidooyin waaweyn iyo difaac xoog leh.
Haddii, halkii aad deggane ahaan lahayd, aad tahay ka faa iideystaha aaminaadda, wali waad badbaadin kartaa inta lagu gudajiro howlaha furriinka. Ka-faa'idaystaha aaminaada ku-meel-gaarka ah ee iska-dhaafka ahi kama bixin karto lacag-bixinta kalsoonida kaligeed. Aaminaada waxaa maamula wakiilka, oo xakame kafaa iideystaha wuxuu jabiyaa shuruudaha aaminka. Maaddaama ka-faa'iideysteyaashu aysan si fudud u aamini karin kalsoonidooda sida il dakhli dheeri ah mar alla markay doonayaan, daqligaas looma dajin karo ujeeddooyinka go'aaminta lacagta.
Xeerarka iyo qodobada
Marka lagu daro qodobka kharash-garaynta ee kor lagu soo xusay, waxaa jira dhowr qodob oo kale oo la tixgeliyo marka la abuurayo aaminka hantidaada badaha. Qodobbadaan dheeriga ah waxay gacan ka geystaan ​​ilaalinta aaminaada iyo hubinta inay ansax yihiin marka arrimuhu soo baxaan, BizFilings sharxi.
Mid ka mid ah qodobka ugu muhiimsan waa jumladda anti-duress. Markii la kiciyay, qodobkaani wuxuu ka hor istaagayaa foomka wakiilka sameynta qaybinta ee aaminka markii aaminlaha ama ka-faa'iideystaha uu sameynayo codsi ka bixitaan ah oo uu xiranayo dharka. “Goress” waa marka deyn bixiyuhu dalbado ama uu helo xukun ka dhan ah aaminka ama ka-faa'iideystaha meel ka baxsan xukunka shisheeye. Maxkamaduhu waxay dalbanayaan in dib loogu celiyo lacagaha. Qodobkaani wuxuu sidoo kale ka horjoogsanayaa deyn bixiyuhu inuu dacwad ka sameeyo hantidaas isagoo aan helin xukun cusub oo ku saabsan xukunka badda. Helitaanka garsoor meel ka baxsan ayaa la dagaallamaya dagaal aad u sareeya. Awoodda sharciyadan waa goobo aad looga xumaado deyn bixiyeyaasha maadaama sharciyada loo xilsaarey kuwa deyn bixiyaha ah.
Sidee ilaaliyuhu kuu ilaaliyaa
Qodobada kale waxaa ka mid ah qodobka ilaaliyaha kalsoonida, jumlada duulimaadka, iyo doorashada qaaska sharciga. Qodobka ilaaliyaha kalsoonida wuxuu magacaaba ilaaliye aaminka awooda u leh inuu ka saaro wakiilka. Mararka qaarkooda, ilaaliyaha ayaa waliba diidi kara qaar ka mid ah falalka wakiilka. Qodobka duulimaadka wuxuu u oggolaanayaa wakiilka inuu ku wareejiyo aaminaada sharci kale. Badanaa, qodobka duulimaadka ayaa dhaqan gala haddii deyn bixiyuhu go'aansado inuu dacwad ka fayl gareeyo baddaha.
Marka hore, deyn bixiyuhu wuxuu ku kharash gareeyaa waqti iyo lacag oo dhan si uu u fayl galiyo dacwad ka socota badda. Kadib, wakiilka ayaa si fudud ugu gudbi kara aaminaada awoodaha kale oo ka dhigaya mid aan mar kale la heli karin. Xulista sharciga qaanuunka ayaa sharxaysa in aaminaada lagu xukumayo qaanuunka awooda u degsan oo loo xilsaaro, maahan awooda aaminka ama kafaa iideystaha. Qodabkani waa waxa bixiya badbaadinta xukunka ee ka dhigaya kalsoonida xeebaha mid aad u mudan.
Halkee lagu Aamini Lahaa Kalsoonidaada
Waxaa jira dalal badan oo leh faa'iidooyin weyn oo badbaado oo hanti ilaalin ah, laakiin midkee ayaa kugu habboon? Jawaabta su'aashan waxay kuxirantahay waxa adiga kuugu muhiimsan iyo hantida aad uxuntahay inaad difaacdo. The Farshaxanka baxsadka wuxuu sheegayaa awoodaha aaminka ee xeebaha ugu wanaagsan inay yihiin Beeliis, Cook Islands, Nevis, Luxembourg, Jersey, Cayman Islands, iyo British Virgin Islands.
Muwaadin Mareykan ahaan, waxay u egtahay in Cook Islands ama Nevis ay tahay doorashada kuugu fiican adiga. Labadan xukun waxay leeyihiin khibradaha ugu badan macaamiisha Mareykanka. Shuruucdooda aaminaadda ayaa tixgelinaya qawaaniinta Mareykanka qaabkooda. Saddexda Nevis, Belize, Cayman Islands, iyo Jasiiradaha Cook Islands ayaa ah seddexda ugu wanaagsan arrimaha canshuuraha. Qawaaniintooda kalsoonida waxay la shaqeeyaan Nambarka Dakhliga Gudaha ee Mareykanka. Tanina waxay fududeynaysaa u hoggaansamidda cashuuraha iyo ka warbixinta. Waddan kasta kuma wada laha khubarada canshuuraha ee deegaanka oo la mid ah afartaas.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara faa iidooyin dal kale oo soo jiidasho leh oo u qalma shaqo yar oo dheeri ah si loo dhiso kalsoonidaada. Qof kasta baahiyadiisu waa kala duwan tahay, waxaana jira xulashooyin badan oo xeelado kala duwan ah oo ku habboon baahi kasta.
Asturnaanta iyo Ilaalinta aad u Baahan Tahay
Si kasta oo wadanka aad u dooratid aaminkaaga ilaalinta xeebaha, iska hubi inaad ku kalsoon tahay khubaro ka caawisa dejinta. Shuruucda ku xeeran xeebaha ku xeeran waxay noqon karaan kuwo adag, khaladaaduna waxay noqon karaan kuwo aad qaali u ah. U adeegso macluumaadka xiriirka ee boggan si aad ula hadashid mid ka mid ah khubaradeena aaminaada badda. Waxaan kaa caawin doonaa inaad fahanto xulashooyinkaaga, xaqiijiso inaad sida ugu fiican u isticmaaleyso xeeladaha ilaalinta hantida badaha, oo kaa caawiya dejinta kalsoonidaada. Waxaan kaloo kaa caawin karnaa sidii aan kugula xiriiri lahayn qareenkayaga gurigayaga ee guriga si aad iskugu dubbaridid ​​dhammaan arrimaha ka baxsan xeebaha ee laga yaabo inay ku soo dhacaan wadada.